Pixel 3 ayaa xaqiijiyay Google - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Pixel 3 ayaa xaqiijiyay Google
Le Pixel 3a wuxuu soo bandhigay muuqaal gaaban oo ku yaal dukaanka Google ee dukaanka. Thanks to this daadinta, waxaan hadda wax badan ka ogaan this mustaqbalka taleefanka-dhexe ee ka mid ah makiinada hal search engine ah.
Inkastoo qaar naga mid ah ay doonayaan in ay soo ogaadaan Pixel 3a, duuf cusub ayaa u muuqata in ay xaqiijiso jiritaanka sheyga. Si kale haddii loo dhigo, waxaan filan karnaa bilawga bilaha soo socda ama toddobaadyada soo socda. Sida lagu sheegay GSMArenaPixel 3a ayaa si kooban uga muuqatay dukaanka online-ka ee Google, isagoo tilmaamaya tilmaamo dhowr ah oo ay tahay inuu soo jiito dareenka dadka isticmaala internetka, gaar ahaan kuwa leh tabar-darro loogu talagalay terminaalka Pixel.
Marka lagu daro magaca taleefanka, bogga la foorarsado waxaa ku jira xiriirka loo yaqaan 'holster'. Sida muuqata, Pixel 3a waa inay lahaataa kiis dharka ...
Ka sokow muuqaalka kooban Pixel 3a on dukaanka Google ee internetka, ogaadana in Pixel 3a 3a iyo XL ayaa sidoo kale soo dhiraandhiriyeen on Google Play Console magacyada code siday u kala horreeyaan "Sargo" iyo "Bonito".
Tilmaamaha farsamada waa sax
Iyada oo loogu talagalay barnaamijkan loogu talagalay horumarinta codsiyada Android, qeexdooyinka labada qalabba waa kuwo sax ah. Xaqiiq ahaan, macluumaadka sida kartida RAM iyo xallinta bandhigga ayaa la daabacay.
Dhab ahaantii, sida 3a Pixel, Pixel 3a XL waa in ay leeyihiin RAM a 4 GB. Against, "Sargo 'waa inay xidhaan bulukeeti la cufnaanta ah 440 dpi, halka" Bonito "la siin lahaa shaashad of 1080 x 2160p ama cufnaanta ah dpi 400.
Muuqaalooyin kala duwan oo kala duwan
Marka la eego qaraarka iyo cufnaanta ee bulukeeti ah, 3a Pixel ku badan tahay waxaa ka mid ah daah 5,6 inches halka 3a Pixel ee XL waa ashtakeeyaan 6 inches dadab.
Thanks to platform Google Play Console, waxaan hadda og nahay in labada qalab laga bilaabi karo bartamaha-2019. Sidaas darteed waxaa suurtogal ah in ay soo muuqdaan inta lagu guda jiro shirka Google I / O 2019, kaas oo furi doona albaabadiisa 7 May.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.fredzone.org/le-pixel-3a-confirme-par-google-989